जमेर तिहार मनाऔं | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो जमेर तिहार मनाऔं
on: २७ आश्विन २०७४, शुक्रबार १७:०३ तीतो मीठो
जमेर तिहार मनाऔं
गृह मन्त्रालयले तिहारमा पटाका र आतिसबाजी खुलेआम नल्याउन र नपड्काउन उर्दी जारी गरिसकेको छ । अब कसैले लुकिछिपी ल्याएर पड्काए भने त भिन्नै कुरा हो । गाउँशहरमै दिनदहाडै गोली पड्किएर मानिस मारिँदा मतलब नभएको जस्तो व्यवहार गर्ने सरकारले पटाकाचाहिँ नपड्काउनू भनेर किन भनेको होला ? कि पटाका नपड्काउनू तर गोलीचाहिँ पड्काए हुन्छ भन्न खोजेको हो कि ? नेपाल सरकारमा पुग्नेहरू धेरैजसो इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा गोली पड्काएकै कारण माथिल्लो पद पड्काउनेमा पर्छन् क्यारे ! त्यही भएरै पो हो कि पटाकाभन्दा बन्दूकहरूप्रति सहानुभूति बढी भएको ?
सरकारी उर्दीहरू प्रायः नबुझिने र अलि अव्यावहारिक नै हुन्छन् । जस्तै, वर्षभरि एअरकण्डिसन अफिसमा बस्ने, त्यस्तै वातानुकूलित नयाँनयाँ कार चढेर ओजोन लेयरमा भ्वाङ पार्ने काममा ठूलै भूमिका खेल्ने, अनि १/२ दिन जनताले आतिसबाजी पटाका पड्काएर यसो मनोरञ्जन लिन खोज्दा नगर भनेर पहिल्यै भाँजो हाल्ने सरकारी हाकिम र मन्त्रीहरूको रवैया बुझिनसक्नु छ ।
हुन त यी मन्त्री, पर्यावरणविद्, मिडियावालाहरूलाई पर्यावरण बचाउने, शान्ति कायम गर्ने कुरा हिन्दूहरूले मान्ने यै तिहारमा मात्रै किन याद आउने गरेको होला ? भारतको नयाँ दिल्लीमा त्यहाँको उच्च अदालतले दिएको एउटा मुद्दाको फैसलामा पटाका किनबेच गर्न पाइँदैन भनेको थाहा पाएर त्यसैको सिको गरेर हाम्रो गृह मन्त्रालयले पनि फूर्तीसाथ पटाका नपड्काउन उर्दी जारी गरेको हो कि ?
त्यसैले यो पङ्क्तिकारको सुझाव छ कि सरकार कराउँदै गर्छ तर पटाकाको धमाकासहित तिहार मनाउने कुरामा भने चुक्नु हुन्न । तिहार हो, कुनै राष्ट्रिय शोक त परेको छैन नि । पर्यावरण बचाउन, शान्ति कायम गर्न बाँकी ३ सय ६४ दिन छँदै छ नि हौ !
त्यसैले सबै मिलेर थरीथरीका बमजस्ता लाग्ने पटाका आतिसबाजी पड्काएर तिहारमा रमाइलो गरौं । यसको आवाजले कानका कीरा मर्नेछन्, लामखुट्टे भाग्नेछन् । लामखुट्टे भागेपछि डेङ्गी, चिकनगुनिया आदि रोग लाग्नबाट मानिसहरू उम्कनेछन् । पटाकाको धूवाँले गर्दा चुरोटको विक्री घट्नेछ । किनकि त्यो धूवाँका कारण अम्मलीहरूलाई केही दिन भए पनि चुरोट सेवन नगरे चल्छ । वर्षौंदेखि तिहारमा सुनिँदै आएको आवाज सुन्न नपाउँदा त नरमाइलो हुन्छ नि त ।
यदि कसैलाई आवाज र ओजोन तहजस्ता कुराहरूको साँच्चै चिन्ता छ भने उनीहरूले सबैभन्दा पहिला आआफ्ना गाडी र मोटरसाइकल बेचून् र साइकल किनेर चढ्न शुरू गरून् । होइन भने यो बम, पटाका, आतिसबाजीविरुद्धको अति विरोध बन्द गरून् । किनकि समाजमा सबै चल्नु पनि त प¥यो । पटाकामा लगानी गर्ने पटके लगानीकर्ता, पटाका बोर्डरबाट शहर, गाउँ हुँदै घरघरमा पुर्‍याउन भित्रभित्रै मद्दत गर्ने सुरक्षा निकायका मानिसहरू, यातायात, लोड अनलोड गर्ने भरिया, विक्रीका लागि पसलपसल पुर्‍याउने भ्यान र सेल्स म्यान र विक्री गर्ने पसले आदि सबैको व्यवसाय गर्ने र आर्जन गरेर खान पाउने हक अर्थात् उनीहरूको खाद्य सुरक्षाको अधिकारको रक्षा पनि गर्नुपर्छ नि त ।
फेरि सरकारले भनेको सबै कुरा सधैं मानिरहनु पनि ठीक हुँदैन । किनकि देशमा मधुमेहका बिरामीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै कुन दिन फेरि तिहारमा मिठाई खान हुँदैन वा रक्सी पिउनु हुँदैन, तास खेल्नु हुँदैन आदि भनेर सरकारले अर्को उर्दी जारी गरिदियो भने के गर्ने ? जाँदैन तिहार पर्वको सबै मज्जा ? त्यसैले आउनुहोस् मेरा प्यारा देशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू खुलेर तिहार मनाऔं, जमेर जुवा खेलौं, मदिराको खोलो बगाऔं, गाउँ शहरै थर्काउने गरी पटाका आतिसबाजी पड्काउन आजैबाट शुरू गरौं । तिहार २०७४ को अग्रिम शुभकामना !